Apha i-THEMAX izakwazisa ngeendlela ezahlukeneyo zokudibanisa zebhanti zokuhambisa irabha. Ibhanti yokuhambisa kufuneka idityaniswe kwiluphu ngaphambi kokuba isetyenziswe. Ke ngoko, umgangatho webhanti yokuhambisa ngokudibeneyo ichaphazela ngokuthe ngqo ubomi benkonzo yebhanti yokuhambisa kunye nokusebenza kakuhle komgca wokuhambisa. Ngokwesiqhelo iindlela ezisetyenziselwa ukudibanisa ibhanti yokuhambisa zibandakanya amalungu, oomatshini ababandayo kunye namalungu atshisayo.
I.Conveyor ibhanti ngomatshini indlela edibeneyo:
Ngokubanzi ibhekisa ekusetyenzisweni kwamalungu ebhandeji yebhanti. Le ndlela idibeneyo ilula kwaye iyonga, kodwa ukusebenza ngokudibeneyo kuncinci kwaye kulula ukonakalisa, okunempembelelo ethile kubomi benkonzo yeemveliso zebhanti zokuhambisa. Kwi-PVC kunye ne-PVG yonke ingqokelela yedangatye-yokudibanisa i-antistatic conveyor belt joints, ngokubanzi iimveliso ezingaphantsi kwebanga le-8 zisebenzisa le ndlela yokudibanisa.
Indlela yokudibanisa ibhendi ebandayo ebandayo:
Oko kuthetha ukuba kusetyenziswa ukubambelela kokubanda okubandayo kumalungu. Le ndlela idibeneyo isebenza ngakumbi kwaye inezoqoqosho kunamalungu oomatshini, kwaye kufuneka ibe nefuthe elingcono lokudibana. Nangona kunjalo, ngokwembono ebonakalayo, kuba iimeko zenkqubo zinzima ngakumbi ukuyazi, kwaye umgangatho wokuncamathela unefuthe elikhulu kwilungu. Ke ayizinzanga ncam.
III.Conveyor ibhanti thermal vulcanization indlela edibeneyo:
Ukuziqhelanisa kungqineke kuyindlela efanelekileyo yokudibanisa, enokuqinisekisa ukusebenza ngokudibeneyo okuphezulu, kwaye izinzile kakhulu. Ubomi benkonzo yokudibanisa bude kakhulu kwaye kulula ukuba babuse. Nangona kunjalo, kukho izinto ezingalunganga ezifana nenkqubo enengxaki, iindleko eziphezulu kunye nexesha lokuphindaphindwa, njl.
Kwimveliso yebhanti yokuhambisa irabha, ukusongela ibhanti kuhlala kuyintloko enkulu kunye nomenzi weengxaki. Kodwa ngokusebenza nzima kuphando kunye nophuhliso, i-THEMAX ifumana isisombululo esihle semveliso kuyo. Ngoku i-THEMAX qhubeka unceda abangaphakathi ukuba basombulule ingxaki edibeneyo kunye nokusongela.